Darjeeling News, Kalimpong News, Kurseong News, Darjeeling Hills, Gorkhaland News by Darjeeling Times – हर्कलाई हार चखाउँदै मोर्चाले चुनाउ जित्यो
कालेबुङ 18 मई। विधानसभा चुनाव समापन भएको एक महिना पछि खोलिएको ईलेक्ट्रोनिक भोटिङ मसिनले कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रबाट गोजमुमो प्रार्थी सरीत राईको भाग्य उदय भएको छ। उनले आफ्ना नजिकका प्रतिद्वन्द्वि जाप प्रार्थी डा. हर्कबहादुर छेत्रीलाई 11,431 भोटले पराजित गरेकी छन्। मोर्चा प्रार्थी सरिता राईले 67,693 भोट प्राप्त गरेकी छन् भने उनी विरूद्ध खडा भएका जाप प्रार्थी डा. हर्कबहादुर छेत्रीले 56,262 भोट प्राप्त गरेका छन्। यसैक्रममा क्रामाकपा प्रार्थी किशोर प्रधानले 5,714, गोराक प्रार्थी अमर लक्समले 3,201, निर्दल प्रार्थी भृगुनाथ गुप्ताले 1,751 अनि नोटामा 3,364 भोट खसेको छ। यहाँको एसयुएमआई विद्यालयमा विहान ठिक आठ बजेदेखि प्रार्थीहरूको उपस्थितिमा ईभिएम मसिन खोलिएर मतगणना सुरु भएको थियो। 19 वटा चरणमा विभाजन गरेर मतगणना सुरू भएपछि सम्पूर्ण मानिसहरू नै चुनाउ परिणामलाई लिएर उत्सुक रहेका थिए। यसैक्रममा पहिलो चरणमा नै गोजमुमो प्रार्थी सरिता राईले 1932 भोटले डा. छेत्रीलाई पछि पारेपछि मोर्चा समर्थकहरूमा खुशीयाली छाएको थियो। यद्यपी 18 वटा चरण बाँकी रहेको कारण मोर्चा समर्थकहरू पनि खुलेर खुशीयाली हुन सकिरहेका थिएनन्। यसक्रममा कडा प्रतिस्पर्धा भएको चुनावी मतगणनाको परिणाम अघि निस्कदैँ जाँदा डा. छेत्रीले पनि आफ्नो पक्षमा निकै भोट बटुल्न थालेको थियो। जसले गर्दा दुई प्रार्थीहरू माझ कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको थियो। अन्तत सम्पूर्ण ईभिएम मसिन अनि पोस्टल ब्यालेटको गणना समापन भएपछि मोर्चा प्रार्थी सरिता राईले विजयी हासिल गरेपछि सम्पूर्ण मोर्चा समर्थकहरूले एकार्कलाई बधाई दिँदै खुशीयाली साझा गरिरहेका थिए। सम्पूर्ण मतगणानाको परिणाम अघि आएर मोर्चा प्रार्थी सरिता राईले विजयी हासिल गरेपछि उनलाई कालेबुङ महकुमा अधिकारी एवं चुनाव अधिकारी निर्मलय घरामीले उनलाई विजय भएको प्रमाण पत्र प्रदान गरे।
कम्मर मर्काउँदै नाचे विमल गुरुङ
‘जितेको जितेकै मोर्चाले, हार्न त कहिले जान्दैन’ – गीत बजिरहेको थियो अनि जीतको खुशीयालीमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ नचिरहेका थिए। ‘गोजमुमो पार्थीले जिते तीन दिन नाँच्नेछु’ भनेर अगावै घोषणा गर्ने विमल गुरुङ विजयको खुशीयालीमा साँच्चै नाचे। उनी सँगै जनमुक्ति पार्कमा जीटीए उपप्रमुख अप्रा. कर्णल रमेश आले लगायत सयौँ गोजमुमो कार्यकर्ताहरू कम्मर मर्काउँदै नाचीरहेका थिए। मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ सरीता राईको विजयमा सरिक हुन 17 मईको दिन नै कालेबुङ आएका थिए। कालेबुङ आएपनि मौन बसेका विमल गुरुङले विहान देखिनै मतगणनाको खबर लिइरहेका थिए। यसक्रममा सरिता राईको विजयको खबर पाउन साथै उनी यहाँको डम्बर चौक नजिक पार्टी कार्यलयमा आफ्ना समर्थकहरूको साथमा आएर जनमुक्ति पार्कमा खुशीयाली मनाउँदै नाचेका थिए।
यो जनताको जित हो
‘यो जित सम्पूर्ण कालेबुङका जनताको जित हो। जनताको जितमा आज म साँच्चै खुशी भएको छु। यसको निम्ति विजयी प्रार्थी सरिता राई सँगै सम्पूर्ण जनतालाई बधाई दिँदछु’ गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने। उनले जितको व्यवधान धेरै नभए पनि ‘जित जित नै हो’ भने। आफ्नो सम्बोधनको क्रममा उनले चुनाव परिणामलाई हेरेर भविष्यमा रूष्ट बनेका जनताहरूलाई पुन: सङ्गठित पार्नका निम्ति कार्य गर्ने पनि बताएका छन्। ‘हामी कहाँ चुकेका छौँ त्यो चर्चा गर्नेछौँ। यदि भविष्यमा जनतालाई साथमा लिनका निम्ति सभासद अथवा नगरपालिका पार्षदहरू परिवर्तन गर्न परे पनि परिवर्तन गर्नेछु’ विमल गुरुङले भने।
सरिता राई विरुद्ध पराजित भएका जाप प्रार्थी डा. हर्कबहादुर छेत्रीलाई विमल गुरुङले शुभकामना दिएका छन्। ‘हारमा मानिसले शिक्षा लिनुपर्छ। डा. छेत्रीले पनि यसबाट शिक्षा लिँदै संघर्ष गर्नुपर्छ। संघर्ष गरिरहेको जित निश्चित हुनेछ। यसको निम्ति उनलाई शुभकामना दिँदछु’ विमल गुरुङले भने। मोर्चालाई परिजित गर्नका निम्ति डा. हर्कबहादुर छेत्रीलाई सम्पूर्ण विकास बोर्ड अनि विभिन्न राजनैतिक दलहरू मिलेर कार्य गरेपनि आखिरमा जनताले गोर्खाल्याण्ड विरोधी शक्तिहरूलाई गतिलो जवाब दिएको बताएका छन्। आफूले जनतालाई कहिल्यै धोका नदिएको बताउँदै ईमान बेचेर कहिले नबाँच्ने बताए। यता उनले सम्पूर्ण बङ्गालमा तृणमूल कङ्ग्रेसले सरकार गठन गर्ने विषयलाई लिएर आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै यसबारे पनि भविष्यमा रणनीति तय गर्ने बताएका छन्।
विधानसभामा जनताको आवज उठाउनेछु – सरिता राई
अर्कोतर्फ कडा प्रतिद्वन्दिता विज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा प्रार्थी सरिता राईले विजय हासिल गरेपछि यता खुशी व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण जनतालाई बधाई सँगै धन्यवाद दिएका छन्। उनले विजय पछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै जनतालाई शान्ति बनाएर राख्ने अपिल गरिन्। यसक्रममा उनले विजयी भएपछि अब कालेबुङका जनताको हितमा विधानसभामा कार्य गर्ने बताउँदै ‘जनताले विजय बनाएर पठएपछि अब जनताको हितमा कार्य गर्नेछु’ भनिन्। उनले कालेबुङ जिल्लाको मुद्दालाई गोजमुमोले कहिल्यै विरोध नगरेको दाबी गर्दै पूर्व विधायक डा. छेत्रीले जिल्लाको मुद्दा कहाँ पुर्याोए अनि त्यसलाई अघि बडाएर पारित गर्ने कार्य गर्ने दाबी गरिन्। ‘विधानसभामा गएर धेरै काम गर्न बाँकी छ। सबै कार्यहरू गर्नेछु। जिल्लाको मुद्दालाई पारित गर्ने कार्य पनि गर्नेछु’ सरिता राईले भनिन्। उनले राजनैतिक शिष्टता अप्नाउँदै नजिकका प्रतिद्वद्वि डा. छेत्रीलाई शुभकामना व्यक्त गरिन्।
Morcha Vote Share Reduced by 50% in the hills Jan Andolan Party Thrives in Kalimpong Town
232,245 total views, 3,542 views today
261,769 total views, 3,543 views today
277,998 total views, 3,542 views today
SpiceJet to launch operations from Sikkim from October 4. SpiceJet’s ninth UDAN destination. They will be operating daily direct flights on Pakyong-Kolkata and Pakyong-Guwahati route 278,016 total views, 3,545 views today Comments comments
278,016 total views, 3,545 views today
277,937 total views, 3,541 views today